Ny mpikambana ao amin'ny Community KDE Daniel Nicoletti dia mila ny fanampiantsika | Avy amin'ny Linux
Mila ny fanampiantsika i Daniel Nicoletti mpikambana ao amin'ny The Community KDE
Novakiako tao amin'ny KDE Blog ary mahatsapa aho fa tsy maintsy manaparitaka azy amin'ny fanantenana fa ampitaina ny hafatra ary afaka manampy ny The Community.
Izaho dia tompon'andraikitra amin'ny fanaparitahana vaovao mampalahelo izay nandika Miguel Chan ao amin'ny bilaoginy Blue Leaf Linux.
Daniel Nicoletti mitazona ny Apper, Print-manager, Color-KDE ary tetikasa hafa dia mila ny fanampiana avy amin'ny Community. Roa taona lasa izay, ny iray amin'ireo famoahana KDE dia natokana ho fahatsiarovana ny zanakavavin'i Daniel, izay maty tamin'ny lozam-pifamoivoizana mahatsiravina tany Arzantina.
Omaly dia nandehandeha avy tany Brezila nankany amin'ny Repoblika Czech i Daniel ary notazonin'ny fifindra-monina alemanina noho ny didy fampisamborana iraisam-pirenena mifandraika amin'ilay loza voalaza etsy ambony.
Miandry ny fitsarana alemanina izy izao hanapa-kevitra raha hanaisotra azy na hanafaka azy, dingana iray izay azo tapaka avy hatrany na afaka enim-bolana.
Mazava ho azy fa io dia sarotra be ho an'i Daniel sy ny fianakaviany, ary koa sarotra ho an'ny olona izay nitondra azy tany Eropa. Tena mila mandeha any Munich ny vadin'i Daniel mba hanampy amin'ny fandrindrana ny fiarovan-tenany ary hanolotra ny mpisolovava azy ary any amin'ny tribonaly Alemanina ny antontan-taratasy rehetra ananany momba ny lozam-pifamoivoizana hahafahan'ny fitsarana mamoaka didim-pitsarana amin'ny fahalalana feno ny zava-nitranga, saingy tsy hainy.hazoany samirery izany. Raha te-hanampy ianao dia namorona fangatahana vola izay ahafahanao manome ho an'ny fandaniana amin'ny dia.
Ka manontany ireo bilaogera namako aho (izay niara-ory tamin'i Sebastian Trüeg tamin'izany fotoana izany) Azafady mba aparitaho ny vaovao. Ary ho an'ireo mpamaky sy mpampiasa Kubuntu sy KDE (ary izay rehetra te-hanohana) azafady mba ampio i Daniel mandritra izao fotoan-tsarotra izao.
Mazava ho azy fa ity zava-misy ity dia mila fanaparitahana faran'izay betsaka sy ny fiaraha-miasa rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Mila ny fanampiantsika i Daniel Nicoletti mpikambana ao amin'ny The Community KDE
Horonan-taratasy ratsy: manantena aho fa hialana tsy ho ela ny tsy fifankazahoana.
Mbola tsy azoko ny antony nisamboran'izy ireo azy sy ny antony tsy maintsy aloako.
Tsy nisy nilaza fa tsy maintsy mandoa na inona na inona COMECON .. Na iza na iza te hiara-miasa .. Manjohy hevitra ve ianao? Heveriko fa napetraka ao amin'ilay lahatsoratra izy ireo .. Tsy misy manery an'iza na iza .. 😉
Tsy nanazava tsara ny momba ahy aho haha
Ny tiako holazaina dia tsy azoko hoe mankaiza ny vola fanomezana: S
mandeha any amin'ny kaonty "Fromlinux" izay hividianan'ireo mpitantana PS3 sy fahitalavitra marani-tsaina rehetra, Ka heveriko fa amin'ny fanjohian-kevitra toy izany dia hanatsoaka hevitra ianao fa hahatratra kaontin'ny vadiny na zavatra toa izany.
Jereo, inona no voalaza ao? "DONATE" ny tiako holazaina ... MANDEHA, aza mandoa, biby masiaka
Lionel dia hoy izy:
Mangataka ny hisamborana an'i Arzantina sy ny lozam-pifamoivoizana? Any Arzantina, izay paradisa tsy manan-tsahala izay tsy misy olona migadra, hafahafa amiko izany ...
Valiny tamin'i Lionel
Tsy manana fomba hahitana raha marina izany na tsia, fa raha sanatria ka mampiely ny vaovao aho .. Izay ihany no azoko atao.
Ity misy firesahana momba ny vaovao raha sanatria ka mamaky azy ianao:
Ratsy loatra amin'ny fifehezana ny fifanakalozana eto amin'ny fireneko. Te hiara-miasa aho, tsy miaraka aminy fotsiny, fa miaraka amin'ireo tetikasan'ny rindrambaiko maimaimpoana.
Uhmmm… toa 'scam' io, 'fitaka' amiko, tsy misy mahalala.
Eny, tsy misy atahoranao izany raha tsy nanao zavatra tsy voatanisa ianao. Raha eo am-pelatanan'ny fitsarana alemanina io dia matokia fa izay meloka ihany. Ny zavatra iray hafa dia raha tany amin'ny firenena manerantany fahatelo misy kolikoly rehetra. Raha mbola tsy nanao na inona na inona ianao dia hifarana tena faly tokoa ny zava-drehetra. Mangina!
Mazava ho azy, any Alemana dia tsy misy ny kolikoly: http://www.lavanguardia.com/internacional/20120217/54256824536/el-presidente-de-alemania-dimite-por-corrupcion.html
hahaha, mazava ho azy, amin'ny raharaham-toekarena dia misy ny kolikoly! Na dia matoky ny fitsarana aza aho. Hikarakara izany ihany i Arzantina ary tsy hitako ho tontolo fahatelo. Ary Espaniola aho.
hahaha tsy tany fahatelo i Arzantina? Mipetraka any Arzantina aho ary manasa anao ho tonga hipetraka eto mandritra ny iray volana monja dia ho fantatrareo ny dikan'ny kolikoly sy ny tontolo fahatelo, "La Argentinidad al Palo" araka ny iantsoana azy eto
Toa ahy i Lionel fa manafangaro ny tontolo fahatelo amin'ny kolikoly ianao. Na aiza na aiza firenena misy ny kolikoly. Na ny zanak'olo-mpianadahy italiana izay ao amin'ny tontolo voalohany dia mitovy lenta amin'ny antsika (angamba avy amin'ny lova no misy azy: P). Tsy hoe ofisialy izany, fa ao anatin'ny zava-drehetra ao Arzantina dia eo am-pivoarana izy io, misy fanabeazana tsara sy maimaimpoana amin'ny ambaratonga telo rehetra, gazety maimaim-poana, hopitaly, asa sosialy, zotra, fotodrafitrasa, manana Internet manodidina ny megabit ianao. na bebe kokoa ao an-trano Ny tsy ampy dia ny tsy fisian'ny asa sy ny fiakaran'ny vidim-piainana. Miampita ny sisintany mankany amin'ny iray amin'ireo firenena manamorona ny avarantsika ary ho hitanao fa io tokoa ny tontolo fahatelo.
Firenena an-dalam-pandrosoana, izany no iantsoan'ny firenena mandroso ny firenena tantanin'izy ireo. Nilaza zavatra toa izany i Galeano, marina?
Firenena miankina i Arzantina, voageja ary ifandroritan'ny imperialisma isan-karazany, miaraka amin'ny ampahany amin'ny faritany iorenan'ny imperialisma anglisy.
Izany dia famaritana marina kokoa noho ny tontolo fahatelo.
Ñandekuera ... Aleoko ny firenena misongadina, ny an-dàlam-pandrosoana, na ny famaritana hafa mifanentana kokoa amin'izao fotoana izao. Ny olana dia ireo famaritana fanavakavahana ny ady mangatsiaka sy noforonin'i Yankees ary »tontolo voalohany» faharoa, sns. Tsy tokony hampiasaintsika, na ny mpitondra antsika, na ny an'i Galeano. Tsy nampiasain'ny Sovietika akory. Tsy hita taratra ny fivelaran'ny zanak'olombelona fa ny vola sy ny tsy fitoviana ihany. Stigmatizations Yankee fotsiny izy ireo izay aleon'ny sasany manaraka anao.
Toa fitaka izany fa azo hazavaina amin'ny zavatra rehetra, Andriamatoa Daniel dia tsy nila nandao ny sisin-tanin'i Arzantina raha maharitra ny fizotrany (ary kely kokoa raha ampangaina izy). Raha nipetraka elaela tany Brezila izy (Sao Paulo araka ny Google+) dia miharihary fa hanome taratasy fampisamborana izy noho ny fitazomana am-ponja vonjimaika ary henjana ihany koa i Alemana rehefa miditra ao amin'ny firenena. Handinika tsara aho ary hanome zavatra, Salama
Manantena aho fa voavaha tsy ho ela ny raharaha ... mirary soa! (ARY)
Ovao ny lohahevitry ny mpitantana fandefasan-kafatra Empathy
Ny Fedora 18 dia nanemotra ny famotsorana azy hatramin'ny 8 Janoary 2013